संगतले अघाडी तर औकातले पछाडी
– कोमल डागी
संगत हर दुई ब्यती बिचको पारीस्परिक सम्बन्ध रहन्छ । हिजो म अनी मेरा साथीहरु म सँग हास्थीय, रमाउथिए साथै सुख दु:खमा हात दिन थिए । दु:खमा पनि हास्ने खेल्ने उर्जा दिएको आभास दिआउ थिय। म पनि यक्दमै खुशी थिए। लाग्थ्यो म सबै तिर सफल छु । किनकी ति सफल मान्छे हरुको साथ थियो मलाई , अनुभुती हुन्थियो कि म संसार भरी कै खुशी मान्छे हो। तर आज बिफल भय जस्तै लागेको छ । आफ्नो जिबनमा सबैभन्दा प्यारो ठानेका ति साथीहरु बिस्तारै बिस्तारै समय जस्तै मौसम जस्तै परिवर्तन भएको देखदा भित्री मन दु:खदो रहेछ।
हो साथी,म आज एउता गरीबिले तिमी हरु जतिकै सफल बन्न सकिन ,तिमिहरुको साथले पूर्ण भएको अनुभब हुन्थियो। तर पनि कम्जोर अनुभव गरिन भित्री पिडा लुकायर भय पनि हास्न सक्ने सामार्थे भएको ब्यती हो । म , जब पिडामा सङ्गर्श गर्दै गर्दा तिनै साथीको प्रगती देख्दा आँफै ले प्रगती गरे जसतो महसुस गरिन्थियो। त्यो दिवा सपना भित्र रमाउने म , खै मलाई किन एस्तो लगथियो साथीको हर काम आफ्नो जस्तै , शायद मलाई केही भोग्नु रहेछ। अनी आफ्नो वास्तविक जिबन म फर्किन्थिए मैले धेरै भिन्नता भेटाए ,र सोच्ने गर्थिए कि म कुन धरातलमा उभियको छु। अनी बल्ल थाहा पाउथिए , औकात भनेको के हो ? अनी थाहा हुन्थियो असली जिबन ,
सुनेको थिए पैसा भगवान त होइन तर भगवान भन्दा कम छैन । पैसा भने पछी भगवान पनि झुक्छ्न। त्यसतै अनुहार भएका समाजका मान्छेहरुले पैसा सँग जिबन दाजे भाबना सँग,नाता सँग, मन सँग जिबनका हर चिज पैसा सँग तुलना गरियो , र त म जस्तै मेरो गाउको ठुले खाडी पस्यो।
खाडीको चर्को घाममा चौबिसै घण्टा रगत अनी पसिना बगायो , किन कि उसलाई धनी बन्नु छ् , समाज ले उस्लाई गरीब भनी तल्ल्लो दर्जामा राखेको छ,।
जब साथीहरुको सफलतामा खुशी मनाइ रहदा औकाले पछी परेको म। उनी हरुले जस्तो सम्झिए पनि मेरो खुशी को सिमा हुन्नथियो। सबै भन्दा दु:ख त् त्यो बेला लाग्थियो जब साथीहरुले बचन लगाय , तरकिए , बाटो काटे ,नचिनेको जस्तो व्यबहार देखाय तब मनमा ज्वाला दन्कियो त्यो पनि पिडाले भरिएको सबै भन्दा पिडा त जब म दु:खमा थिए मैले एउटा सानो सहयोग मागे उनिहरुले शहजै मन ढुङ्गा बनाय , कसैले फोन off गरे ,त कोहिले म अहिले जिल्ला बहिर छु भन्दै ढाटे। तर उनिहरु म दुघटना परेको ठाउँ नजिकै थिए । तब मलाई अभास भयो कि नाता त केवल प्रयोग गरेर आफु माथि चढने लिस्नो पो रहेछ।
त बिना हाम्रो को छ र?
लेखक : काेमल डाँगी
त त मेरो दाजु जस्तै होस् , तिमी त् मेरो आफ्नै घरको भाई जस्तै लाग्छ। तलाई हाम्रो अभाब हुन दिन्न , भन्ने ति साथीहरु आज शहजै भनिदिय तेरो कुनै खाचो छैन तेरो औकत के हो ? उनिहरु लाई थाहा छैन कि साथीको नात को लागि आफ्नो औकत भुलेर आफ्न सपना भुलेर उनिहरु जस्तै बनी रहेको छ् भनेर ,
साथीहरुलाई थाहा छ् कि जिन्दगी मुड्मा चल्छ। म त वास्तविक जिबनलाई भोग्दै ,आफ्ना पिडा अनी जिबनका प्रहर सँग जुधदै आएको मान्छे म आफ्नो सरल जिबन साथी अरुलाई सुम्पिय , उनिहरुले देखाएको बाटो मलाई सधैं राम्रो लगिरह्यो , तर त्यो बाटो नाजुक र सघुरो थियो। सुरुमा भेट हुँदा जसरी खुशी साटेका थियौ। पछी त्यस्तो रहेन । समय सँगै सबै बद्लिए उनी हरु पैसा को नजले अघी परे तर म पैसा अनी औकतले पछाडि ,
-कसैको जिबन सँग मेल खाएमा सम्योग मात्र हुनेछ ।